Realme Watch 2, oo ah qiimaha gelitaanka-qiimaha jaban ee lagu gashado dharka | Wararka Gadget
Realme Watch 2, oo ah qiimaha gelitaanka-hooseeya ee lagu beddeli karo kuwa xidhan
Realme wuxuu sii wadaa inuu sharad ku bixiyo bixinta lacag lagu hagaajiyay lacag qalabkeeda isla markaana uu istaagayo ilaa Xiaomi dhul ay umuuqatay inuu kaligiis xukumayo. Si la mid ah kooxda la tartanta, Realme waxay soo gelaysay noocyo kala duwan oo alaabooyin kala duwan ah, saacadahana ma noqon doonaan kuwa ka reeban.
Waxaan si qoto dheer u eegaynaa Realme Watch 2, oo ah nooca ugu raqiisan ee daawashada Realme si ay u soo jiito isticmaaleyaasheeda marka ugu horeysa ee la xiran karo. Nala baro khibradda aan ka helnay ee ku saabsan saacadda shirkadda Aasiya iyo haddii ay runtii u qalanto qiimaheeda yar.
Sidii caadada inoo ahaydba, waxaan ku wehelinay gorfayntan fiidyow yar kanaalkeena YouTube, dhexdeeda waxaad kuheli doontaa qaddarin la'aanta sanduuqa Realme Watch 2 iyo sidoo kale tilaabooyinka qaabeynta koowaad iyo fudud. Ka faa'iideyso fursad aad ku qorto kanaalkayaga YouTube maxaa yeelay habkaas ayaad nooga caawin kartaa inaan sii wadno koritaanka oo aan kuu soo qaadno falanqaynta ugu daacadsan ee shabakadda. Hadaad ka heshay qiimaha Amazon waa mid aad u hooseeya oo kaa yaabin doona.
1 Naqshad: Jijimadii rabtay inay noqoto saacad caqli badan
2 Isku xirnaanta iyo dareemayaasha
3 Shaashad iyo ismaamul
Naqshad: Jijimadii rabtay inay noqoto saacad caqli badan
Marka laga hadlayo soo saarista, waxaan la yaabnay fudeydka xad dhaafka ah ee Realme Watch, waxaa lagu dhisay balaastigga "jet black", nooca leh soo jiidashada gaarka ah ee xagashada. Muuqaal ahaan waa saacad, oo leh qaab dhaqameed iyo cabir waxa smartwatch yahay, si kastaba ha noqotee, isla marka aan daarno waxaan ogaanay in inta badan ee hore ay yihiin bezel, waxaan qiyaasayaa in ku dhowaad 35% haddii aysan ka badneyn, iyo taas waxaa u sabab ah guddi-hoosaadkeeda yar-yar ee 1,4-inji cabirka ah 257.6 x 35.7 x 12.2 milimitir. Sidaan soo sheegnay, miisaanka si la yaab leh ayuu u hooseeyaa, kaliya 38 garaam taasi waxay kaa dhigeysaa inaad dareento, Ned Flanders style, sida inaadan waxba xirneyn.
Waxay leedahay hal badhan oo dhinac ah oo ka samaysan caag ka duwan, leh waddo ku filan oo loo isticmaalo dhaqanka taasna waxay u adeegtaa inay dejiso hamigeenna.
Waxaan leenahay saldhig hal xukun magnetized, Iyada oo leh laba biinanka birta ah, waxay u shaqeysaa si sax ah waxayna leedahay dherer ku filan. Waxay leedahay suun 22-milimitir ah oo ka sameysan silikoon leh xoogaa xiritaan gaar ah. Qiyaasta ayaa ku filan oo u tudh ah caruusadaha badankood, in kasta oo dabacsanaantiisu kaa dhigi karto qalad, sidii nagu dhacday, waad adkaynaysaa intii loo baahnaa. Suunka ka baxsan wadada ee loo isticmaalo si joogto ah kaas oo leh "jillaab" caalami ah, mabda 'ahaan waxaan awood u yeelan doonnaa inaan meel dhigno ku dhowaad midka aan dooneyno, in kasta oo Realme ay hubiso inay bilaabi doonto xarigyo kala duwan inta lagu jiro nolosha waxtarka leh ee aaladda.
Isku xirnaanta iyo dareemayaasha
Realme ma sameynin xog dadweyne oo laxiriirta processor-ka, RAM iyo keydinta Realme Watch. Marka laga hadlayo tan dambe, waxaan qiyaaseynaa inay kufilan tahay in la yeesho dhinacyo kaladuwan oo kala geddisan, ugu yaraan iyada oo la tixgelinayo in maareynta maaddooyinka wax lagu duubo ay ku kooban tahay koontaroolka fog ee qalabka moobiilka la isku duubay. Waxaas oo dhan, way isticmaashaa Bluetooth 5.0 leh xiriir fudud via Realme Link, oo aan xasuusanno, ayaa la jaan qaada labada Android iyo iOS.
Waxay leedahay a saddex dhudhun xawaare in si wanaagsan loo xisaabiyo dhaqdhaqaaqa isla markaana loola socdo jimicsigeena sida ugu macquulsan uguna macquulsan. Waxaan leenahay waqti isku mid ah dareeraha garaaca wadnaha waxaana soo buuxiya a dareeraha dhererka oksijiinta dhiig ku dhex jira maalmahan. Wax yar oo awoodo ah ayaan sheegi karnaa, ma lihin WiFi ama GPS, sida iska cad waxaan iska hilmaamaynaa LTE ama tiknoolajiyad kale oo wireless ah, laakiin dabcan, waxaan ka hadlaynaa qalab oo qiimahoodu yahay wax lagu qoslo, Qofna kuma weydiin karo gabi ahaanba wax ka badan waxa aad ku haysato qaybta farsamada. Waxaa xusid mudan in walaalkiis "Pro" uu awood u leeyahay inuu GPS iskiis isu dhigo.
Shaashad iyo ismaamul
Waxaan helnay guddi de 1,4 inji, waxay bixisaa wadarta qaraarka 320 x 320 pixels, taasi waa, cufnaan dhan 323 pixels halkii inji. Waa wax lala yaabo in qaraarku uu waxyar ka hooseeyo kan walaalkiis "Pro", wuxuu bixiyaa cufnaan pixel ah oo si aad ah uga sarreeya tan nooca "qaaliga ah" ee aaladda. Shaashadu waxay bixisaa goobo iftiin oo kala duwan oo loogu talagalay guddiheeda LCD, tijaabooyinkeenna waxay muujisay in ka badan intii ku filnayd Isticmaalka bannaanka noocyadiisa kala duwan, isdifaacidda si sax ah labadaba marka la soo bandhigayo waxyaabaha la soo bandhigayo iyo marka lala macaamilayo, waxay si sax ah uga jawaabaysaa isdhexgalka jirka.
Sida batteriga, waxaan haynaa 315 Mah kaasoo bixiya waqti teori aragtiyeed sida ku xusan Realme oo qiyaastii ah 12 maalmood, Imtixaannadeennii waxaan ku gaarnay maalintii tobnaad dhibaato la'aan, In kasta oo heerarka lagu ballanqaaday astaanta aan la gaarin, haddana si aad ah ayey isugu dhowdahay, waxay ku xirnaan doontaa isticmaalka aaladda ay adeegsadeen isticmaale kasta. Lacagta oo buuxda ayaa naga qaadan doonta wax yar saacad.
Waxaan helnay qalab leh shaqooyinka aasaasiga ah ee si fiican loo calaamadeeyay, xitaa haddii aad leedahay smartwatch heer sare ah waxaad ogaan doontaa in 90% waxa aad isticmaasho ay ku jiraan Realme Watch 2, in kasta oo waayo-aragnimadu, haa, ay si cad u jaban tahay. Waxaan leenahay nidaam saadaalinta cimilada, in ka badan 90 nooc oo tababar ah iyo tallaabooyinka aasaasiga ah ee kormeerka isboortiga joogtada ah, waxaas oo dhan ayaa lagu muujiyay Xiriirka Realme, codsi bixiya soo koobitaan iyo muuqaal xadidan, laakiin taasi waxay noo oggolaan doontaa inaan si dhakhso leh u beddelo qaybaha.
Saadaasha hawada (aan weli si sax ah loogu turjumin Isbaanish)
Raadi qaabka taleefanka
Kaamerada fog fog
Xusuusin Xusuusin Dhamaystirka Himilada Maalinlaha ah
Qalabku wuxuu leeyahay IP68 caabbinta biyaha, In kasta oo aan loogu talagalin inay la dabbaasho, waxay u adkaysan doontaa buufinnada aasaasiga ah, markaa waxay iska caabin doontaa tababbarkayaga dhibaato la'aan.
Waxaan leenahay, sidaan horay u sheegnay, jijin raba inuu noqdo saacad. Shaashadu waxay leedahay naqshad laba jibbaaran oo xoogaa ka weyn sidii caadiga ahayd, laakiin shaqooyinku kama dhaafayaan waxa lagu bixiyo qiimaha kale, Xiaomi Mi Band 6. Haddii aad rabto qalab leh saacad bilicsanaanta iyo shaqooyinka aasaasiga ah, 50ka euro ee ay ku kacayso, waxaa jira xulashooyin yar sida Realme Watch 2.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Smartwatch » Realme Watch 2, oo ah qiimaha gelitaanka-hooseeya ee lagu beddeli karo kuwa xidhan
Si dagan ugu safar xagaagan baabuur muraayaddan dashcam / gadaal ah